U adeegso Doollarka Doorashada Maaliyadeed ee Thrivent si aad u taageerto Cunnooyinka Lugaha - Cuntooyinka Gargaarka
U Isticmaal Doolarkaaga Khiyaar Dooro Maaliyadeed si aad ugu taageerto cuntada ku saabsan shaagagga
Xubnaha Maaliyadeed ee Uqalma ayaa hadda fursad u leh inay ku taageeraan Metro Meals on Meals iyagoo u maraya barnaamijka Thrivent Choice! Xubnaha waxaa loo qoondeeyey Doolar Doorosho ka dibna way u adeegsan karaan iyaga inay ogeysiiyo Thrivent ururada samafalka ah ee ay ka helayaan deeq-lacageedka Thrivent Metro Meals on Wheels ayaa hadda ah mid ka mid ah ururada aan macaash doonka ahayn ee xubnaha Thrivent ay dooran karaan inay u jiheeyaan Dooqooda Doolar xagga.
Sida loo Toosiiyo Doolarka Dooqa Doolarka ah
Qeybta Doolarka Dooqa Tooska ah ee midigta, guji “Hada bilow”
Soo gal adiga oo galaya aqoonsigaaga isticmaalaha iyo lambarkaaga sirta ah. (Haddii aadan wali iska diiwaan gelin Thrivent.com, guji "Isdiiwaangeli helitaanka koontada.")
Soo hel tirada Doolarka Dooqa ee la heli karo si aad u toosiso.
Raadi oo hel meelaheeda metrooga ee giraangiraha.
Xulo "Toos Dhammaan" ama geli lambar cayiman oo guji "Toos Hadda."
Wac 800-847-4836 oo markii laguu diro, dheh "Thrivent Choice."
Taabo 1 si aad uxilxiso Doolar Dooro ama 2 si aad udhageysato Shuruudaha iyo Shuruudaha Xulashada Thrivent (Shuruudaha iyo Xaaladaha ay kujiraan (Haddii lagaa dalbo, dheh ama qor lambarka taleefankaaga iyo taariikhda dhalashada.)
Wakiil ayaa kula shaqeyn doona adiga si loo jiheeyo Doorshada Doolarka.
Ayaa U Qalma Xulashada Seddexaad?
Xubnaha uqalma ee loo qoondeeyey Doolarka Doolarka waxaa kamid ah:
Shakhsiyaadka u qalma badeecooyinka waxtarrada Thrivent sida nolosha, dakhliga naafada iyo caymiska daryeelka muddada-dheer ama sannadlaha.
Dadka haya u-qalmitaanka Thrivent jago hoggaamineed oo iskaa wax u qabso ah.
Waad hubin kartaa inaad aragto haddii aad u-qalanto barnaamijka Thrivent Choice halkan.
Xilliga ugu Danbeeya ee Xulashada Choice ee 2017 si loo hago doollarka waa 31-ka Maarso, sidaa darteed haddii aad haysato Doolar Doolar oo aad ku hagto, fadlan ka fiirso inaad ku hagto iyaga meelaha loo yaqaan 'Metro Meals on Wheels'. Maalgelinta deeqda doorashada Thrivent Choice waxaa loo isticmaali doonaa in lagu taageero kaalmaynta nafaqada leh ee waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool dhammaan magaalooyinka mataanaha ah. Halkan guji wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijka Thrivent Choice.